HS:-Wararka naga soo gaaraya magaalada B/weyne oo ah xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in laga yaabo in ay gudaha magaalada ka fuliyaan qaraxyo waaweyn kooxaha Alqacida taageera sida Al Shabaab. inkasta oo uusan wali si rasmi ah u howlgalin maamulka cusub ee dhawaan la wareegay hogaanka Hiiraan oo ay ku mashquulsan yahiin shirar lagu micneeyey intooda badan is barasho iyaga iyo shacabka ah ayaa hadane waxaa maalmahii la soo dhaafay magaalada ku sii qulqulayey dhalinyaro meelo fog fog ka yimid kuwaasi oo isku egeysiinayo ganacsato guryana ka gireysto mid ka mid ah xaafadaha ay magaalada B/weyne ka kooban tahay oo lagu magacaabo Howl-wadaag.
Dhaliyaradan ayaa sidan oo kale magaalada ugu soo qulqulay 2009-kii xiligaas oo laga soo abaabulay magaalada Mogdishu ilaa ay dharaar cad magaalada gudaheeda ka fuliyeen qaraxii lagu hoobtay ee Jun 18 ka dhacay halkaas ayna ku nafwaayeen dad badan.
Sida warar sugan lagu helayo ciidamada maamulka Hiiraan waxey xaafada Howl-Wadaag ka joogaan oo ka ilaaliyaan jidadka waaweyn oo kaliya laakinse guryaha xaafadaas waxaa qaarkood yala hub waaweyn waana meesha kaliya ee magaalada B/weyne shacabkooda laga dhibaateeyo markasta.
Kooxaha dhalinyarada ah ee magaalada Ku soo qulqulaya ayaa siyaabo kala duwan ku soo gala magaalada.qaar waxey garab ka helayaan mid ka mid ah taliyayaasha Police-ka magaalada kaasi oo horey xilal uga soo qabtay maamulkii Hiiraan State ilaa uu ugu danbeyn ku biiray Dooxada Shabeele sidaasina ilaa maanta maamulka cusub uga tirsan yahay, sida ay marar badan ka dhawaajiyeen tiro yar oo shacabka ah oo kunool xaafada Howlwadaag oo aad u baqaya in ay arintaas meel fagaaro ah ka sheegaan.
Xeeladaha ay isticmaalaan ee ay gudaha magaalada ku soo galaan dhalinyaradaan waxaa ka mid ah magaalada banaankeeda qiyaastii 4 ilaa 5KM ayey gawaarida ay saaran yahiin oo u badan kuwa xamuulka kaka soo degaan. hadii waqtiga ay magaalada soo galayaan ay tahay maalin waxey sugaan ilaa ay habeen ka noqoto dabadeedna si xeeladeysan ayey ku soo galaan qaarkoodna mararka qaar waxey magaalada soo galaan iyagoo saaran gawaarida raaxada oo ay leeyahiin dad gudaha magaalada caan ka ah kuwaasi oo iskugu jira ganacsato iyo masuuliyiinta maamulka qaarkood.
Dabcan inta badan qaraxyada iyo miinooyinka ka dhaca dalka Soomaliya siiba caasimada Soomaaliya amaba degaanada ku xeeran waxaa qeyb ka ah shaqsiyaad xilal ka haya dowlada amaba maamulada gobolada ka jira oo aan marnaba laga maleysaneyn marka wax dhacaane iyaga noqda kuwa ugu horeeya ee baaritaanka sameeya.
Inkasta oo aan wax badan oo sir ah iney u qarsoon tahay laga fileyn maamulkaan cusub maadaama dhawaan lagu soo daray xubin xiriir wanaagsan la leh kooxda Shabaab hadane nabadgalyada magaalada oo maalmahan aheyd mid wanaagsan waxaa laga yaabaa in ay ka dhacaan qaraxyo maadaama aysan ciidamadu sidii hore u foojigneyn.
Meelaha ay sida weyn u daneynayaan in ay qaraxyada ka geystaan ayaa loo maleynayaa in ay ka mid yahiin goobaha muhiimka ah ee ganacsiga iyo xarumaha maamulka.
· admin on April 15 2013 13:42:46 · 0 Comments · 2007 Reads ·
14,584,157 unique visits